Gunjan FM 105.3 डन गणेश लामाको भावुक बयान – मैले अहिलेसम्म कसैको आँशु खाएको छैन
०३६ सालको जनमत संग्रहपछि कांग्रेस छाडेर पञ्चायतलाई समर्थन गर्नुभयो । दुई पटकसम्म प्रधानपञ्च र जिल्लाको उपसभापति हुँदै ४६ सालमा भएको जनआन्दोलन पश्चात फेरी राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो । अहिले कांग्रेसलाई सघाउँदै हुनुहुन्छ । मेरो पिताको आमा रञ्जु थापा क्षेत्रीसँग अन्तरजातिय विवाह भयो । मेरो सौभाग्य भनुँ या अवसर मैले बाल्यकालदेखि नै काठमाडौंमा अध्ययन गर्न पाएँ । २०३६ सालमै मेरो बुवाले काठमाडौंको भिमसेन गोलामा घर बनाइसक्नु भएको थियो । काभ्रेमा जन्में तर काठमाडौंमा हुर्कें ।
राजधानीका क्याम्पसहरूमा अत्यधिक राजनीतिक गतिविधि हुन्थे । पशुपति क्याम्पस अछूतो थिएन । नेपाली कांग्रेस दुई भागमा विभाजित थियो– गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस । हामीले प्रजातान्त्रिक कांग्रेसलाई समर्थन ग¥यौँ । स्ववियु चुनाव आएपछि विद्यार्थी संगठनबीच ‘झैझगडा’ हुन्थे । ठूलो झगडाको शुरूवात त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट भयो । ५७र५८ सालमा स्ववियु चुनावको समय थियो । हामी पार्टीका साथीहरूलाई सहयोग गर्न त्रिचन्द्र क्याम्पस गयौँ । त्यहाँ परिस्थीति अर्कै बनेको रहेछ । कांग्रेस संस्थापन पक्ष र एमाले निकट अखिलबीच गठबन्धन थियो । तर, हाम्रो प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन बलियो थियो । उनीहरू मिलेर हामीमाथि आक्रमण गरे ।
मेरो सहयोगबाट कोही मान्छे शिक्षित भए त्यो मेरो सफलता थियो । तर मैले सहयोग गरेको कसैलाई थाहा थिएन । धेरै स्कुललाई १० वर्षसम्म लगातार पैसा दिएँ । एउटा विद्यालयबाट ३० देखि ३५ जना विद्यार्थीले एसएलसी दिन्थे । कयौं पास भए । यता कयौँ झगडाहरू भइरहन्थे । झगडाको कारण हुन्थ्यो । रामेछापको एउटा गरीब भाइले काठमाडौंमा रेष्टुरेन्ट गरेर खान्छु भन्दा टोलको ट्यापेहरूले ५ वटा बियर खाइदिन्थे । त्यस्तो अवस्थामा मैले रोकें होला । यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन् । त्यस्तो ठूलो कुनै घटना भएको होइन । गलत चिजहरूलाई लिएर कहिल्यै झगडा गरेको पनि छैन । मैले यसो भनिरहँदा आम पाठकहरूलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, म झूटो बोल्दिनँ । किनभने व्यक्तिको इतिहास उ जन्मेको समाजलाई त पक्कै थाहा हुन्छ । काभ्रेमा सँगै गुच्चा खेल्ने साथीहरूलाई मेरो बारेमा पक्कै थाहा छ ।
यहाँ थुप्रै प्रहरीका पूर्व आइजीपीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ । थुप्रै मन्त्री र कर्मचारीहरू मुद्दा झेलिरहेका छन् । आफूले आफूलाई दुधले धोएको भन्ने मान्छेहरूलाई मुद्दा लागेको छ । एउटा एआईजीलाई विगार्न अर्को एआइजी लागेको हुन्छ । सायद मेराविरूद्ध पनि कोही लागेको होला । म निष्ठा र इमानदारीपूर्वक व्यापार र राजनीति गर्दै गरेको युवा हुँ । मेरो पनि दिमाग छ । खट्न सक्छु । मैले समाज प्रति योगदान गरेको छु । मैले यसरी नै अघि बढ्दा केही मान्छेहरू म देखि अत्तालिएको हुनसक्छ ।मलाई ‘गुण्डा नाइके’ भनेर समाचार लेख्ने केही पत्रकारसाथीहरू हाँसिहाँसी भन्छन्, ‘तपाईंको नाम जोड्ने वित्तिकै टिआरपी बढ्छ । घण्टामा लाखौंले हेर्छन् ।’
मैले उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने गरेको छु, कसैको चरित्र हत्या गरेर आफ्नो व्यावसाय अघि बढाउँदा यसले राम्रो हुन्छ र ? म व्यापार गरेर खाने मान्छेलाई गुण्डा नाइके भनिरहन मिल्छ ? हुनसक्छ कहिलेकाँही करको दायराहरू पुरा नगरें हुँला । म माथि मुद्दा लाग्दा कर प्रणाली त्यति चुस्त थिएन । यहाँ घडि किनेको बिल सबैले राख्दैनन् । यहाँ छुट पाउनका लागि श्रीमतीको नाममा जग्गा जोडिन्छ । २० लाखमा जग्गा किनेर १० लाख देखाएर कर बचाइन्छ । त्यो जग्गा एक वर्षमा बेच्दा एक करोडमा बेचिन्छ । अनि ८० लाख नाफा गरिन्छ । यो रकम ड्रग्स बेचेको भन्दा बढी कमाई हो । त्यसको स्रोत खोजी किन हुँदैन ? राज्यसँग के नीति छ ?
अर्को कुरा हामी बाँचेको संसारमा सम्पूर्णले भरिपूर्ण र कमजोरी नभएका मान्छे हुँदैनन् । गौतम बुद्धको पनि कुरा काट्नेहरू थिए । राम भगवानको पनि कुरा काट्नेहरू छन् । बिन लादेनलाई विश्वले अपराधी मानिरहँदा एउटा जात र समुदायले ‘हाम्रो मुक्तिको लागि लड्ने’ भगवान भनिरहेको छ । तपाई काभ्रे जानुुस् मैले गरेको समाजसेवाको प्रभाव देख्नुहुन्छ । चाहे भूकम्पको बेला होस् या त्योभन्दा अघिको समय मैले निकै सहयोग गर्न पाएँ । २०७० को निर्वाचनमा मैले काभ्रेबाट चुनाव लडें । त्यहाँ ६ हजार भोट ल्याएँ । त्यो भोट त्यसै आएको थिएन । मरो समाजसेवाको परिणाम थियो । मेरो चुनावी अनुभवले बताउँछ – रगत माग्नुस् २ पौण्ड रगत दिन तयार हुन्छन्, पैसा दिन तयार हुन्छन् तर भोट दिन तयार हुँदैन । भोट मान्छेको मन र विश्वास जितेर लिनुपर्छ । चुनाव लड्न १० जनालाई मैले नमस्कार गर्न जान्नु पर्छ । म १० जनाको नमस्कार खान लायक म बन्नुपर्छ । त्यत्तिकै नेता त हुँदैन । गाली सहनुपर्छ । मैले जीवनमा धेरै गाली सुनेको छु । पछाडी कुरा काट्नेहरू छन् । काठमाडौंको बजारले मलाई एउटा ढंगले चिन्छ । तर, मेरो गाउँमा त्यस्तो छैन । मैले ढोग्नुपर्ने मामा भन्नुपर्ने काका भन्नुपर्नेहरू धेरै छन् । यो ठूलो डन हो भनेर मलाई गाली नगर्ने होइन । मलाई नेता भनेर गाली गर्छन् ।
जतिबेला हामीले नेपाली कांग्रेससँग पार्टी एकता गर्यौँ । त्यो समय पार्टी एकीकरणलाई होइन मेरो तस्विरलाई महत्व दिइयो । पार्टी प्रवेशमा मलाई ‘डन’ भनेर जोडियो । यसले नेपालको पत्रकारीताको दरिद्रता देखाउँछ । प्रीय पत्रकार मित्रहरूले सक्नुहुन्छ भने चुरोट खाएको मान्छेलाई छुटाउनुस् धर्म हुन्छ । ड्रग्स खाएको मान्छेलाई मुक्त गर्नुस् त्यहाँ तपाईंको पत्रकारीताको अर्थ रहन्छ । मान्नुस् कि म हिँजो झगडिया थिएँ । गुण्डा थिएँ । तर, मैले कानुन अनुसार सजाय भोगेर समाजमा सेवा गर्छु सुध्रन्छु भन्न पाउँदिन ? कतिपय नेताहरू ठूला क्राइमबाट आएका छन् तर, मेरो त्यस्तो इतिहास पनि त होइन । मिडिया वा प्रशासनले कस्तो समाज चाहेको छ । ड्रग्स खाएर सुध्रेको मान्छे फेरी ड्रग्स नै खाइरहोस् भन्ने चाहान्छ ?
छोराले त्यो तस्विर देखेपछि पत्रिका घिसार्दै ल्यायो र भन्यो,‘बाबा‘बाबा.. तपाईंको फोटो रहेछ, ।’ त्यतिबेला मेरो आँखाभरी आँशु भयो । त्यो दिनदेखि म पत्रिकाको ग्राहक बन्न सकिनँ । विहान उठेर पत्रिका पढ्दा सँधै झस्किन्थें ।
अपराधको ठूलो कारक बेरोजगारी हो । अपराधको जड गरिबी हो । कोही पनि मान्छे आमाको कोखबाट जन्मनु अघि ‘चोर’ बन्छु भनेर जन्मिदैन । जब उ जन्मिन्छ । उ बाँचेको समाजले बाध्यताहरू सृजना गरेको हुन्छ । एक पेट खान र एक सरो लगाउनका लागि मान्छे चोरी गर्न बाध्य छ । चोरी गरेर खाने मान्छेकोे समयक्रममा चोरी आदत बनिदिन्छ । राज्यले नै यो बारेमा सोच्नुपर्छ । तर, म नेता हुँ । जनताको सेवा नै मेरो धर्म हो । एउटा गरिब परिवारको मान्छे अभावहरू पूर्ति गर्न मलेसिया जान्छ । उसले गाउँमा रहेकी आफ्नो बुढी आमाको एक तोला सुन, बाख्रा, भैँसी वा कुखुरा समेत बन्दकी राखेर चर्को ब्याजमा ऋण लिएको हुन्छ । तर, यहाँका मेनपावरका दलालहरूले उसले चर्को ब्याजमा लिएको एक डेढलाख पैसा पनि लुट्छन् ।
(२१ मंसिर अघि लामाले मिडि